Jaamacada Helsinki oo bixinaysa koorso luuqada Af-soomaaliga ah | Somaliska
Af-Soomaali / Finland / Waxbarashada
Jaamacada Helsinki University ayaa noqonaysa jaamacadii ugu horeysay ee cariga Iskaandineeviya ee bixinaysa koorso jaamcadeed luuqada Af-soomaaliga ah. Jaamacada ayaa bixinaysa Bachelors Degree oo Af-Soomaali ah, iyadoo qorshaha mustaqbalka xitaa lagu soo dari doono heerka Masters Degree.
Waxbarashada ayaa la qorsheynayaa in ay bilaabato deyrta sanadka 2017, iyadoo sanadkaan ay bilaabanayso koorso jaacameed 15-dhibcood ah oo luuqada Af-Soomaaliga. Tirada ardada la qaadan doono ayaan wali la go’aamin balse qiyaasta ayaa ah 6-8 arday. Sababta ay jaamacada Helsinki u bilaabayso waxbarashada Af-Soomaaliga ayaa ka dambaysa tirada Soomaalida Finland oo lagu sheegay mid badan.
“Waxbarashadu ma noqonayso luuqada oo keliya balse waxaa sidoo kale la baran doonaa dhaqanka Soomaalida” ayuu yiri Arto Mustajoki oo ah diinka kuliyada Arts-ka.
Volkanaha oo saameeyay diyaaraha Sweden
Asc wr wb. waa warbixin aad runtii uwanaagsan waanad ku mahadsantahay, waxa ila wanaagsanaan lahayd in aad soo raaaciso link. Macnaha halkii aad ka soo xigatay warkan.
Axmed Samatar says:
May 16, 2016 at 15:52
Ascw, waxaan rabaa in aan kaa saxo in aysan jamaacada Helsinki ugu horrayn bixinta koorso jaamacadeed oo luuqada Afsoomaaliga ah ee waxaa ka horeeyey Jaamaca Yataboori oo bilowday 2011 ilaa haddana wadda. Mahadsanid
Omar Macalin says:
maasha allah afkeeyna somaliga waa muhiim in la barto waxoona muhiim u yahay
dunida dhamaan dhaqankeeyna neh somaliga waa dhan aad iyo aad u dab ween so jireen ah qiima ween ku fadha dadyooga dunida neh hadee bartaan faa iido badan ayee heli doonaan insha allah
Jaamicadeed Göteborg bachelors degree Af soomaali ma bixiso ,laakiin waxeey bixisaa koorso af soomaali ah oo lagu qaadanaayo 7.5 hp
Asc wlalayaal waxaa iga caawisiin waxaa skolka ka dalbaday guryaha ardayda la siiyo dadka sharciga heesto oo ardayga ah guryahaas waa nuucee ma guri arday ila dagan miyee i siinayaan mise guri kaligee dagaayo waa nuucee guryahaas mida kale bishaan waxaa ii bilaawatay da da 20 år
Abubaker Ahmed sxb waxaad ka aqrisaa Yle News haddii aad finnish ka isku fiicantihiina Yle uutiset google ku qor kadibna kan ugu koreeya baar waad helaysaaye tankale wariye jaamacdda Goteborg ayaa bixisa koorsadaan oo 2011 bilowday mahadsanid
masha allah afkeena hooyo waa hormaray
Dhaman waan idiin salamay, jimce wngsan
Wll somali hadi anu nahy mxa maanta keenay iina luqadeena dad kle jamacado iyo shaqo abuur uu noqoto? anaku dadka anu barno oo wadankeena aan ku barno. intaas maanu awodi weynay? Somaliyay hurdo goormanu ka kacayna ?